स्वास्थ्य मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन काठमाडौंका ६ ‘ठूला ठग’ अस्पताल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > स्वास्थ्य मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन काठमाडौंका ६ ‘ठूला ठग’ अस्पताल
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन काठमाडौंका ६ ‘ठूला ठग’ अस्पताल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक छानविन समितिले काठमाडौंमा नाम चलेका ६ ठूला अस्पत्तालले मनपरी शुल्क असुली र ठगी गर्ने गरेको फेला पारेको छ ।
यदि सरकार, नियामक निकाय र अपरेटरले यस्तो जाली उद्धार हुँदैन भनेर विश्वासिलो आधार निर्माण नगर्ने हो भने यसले पर्यटन क्षेत्रमा गम्भिर असर गर्ने उनको भनाइ छ । “त्यसैले सरकारले अब पहिला त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ”, उनले भने “अनि दोषीलाई के के कार्वाही भयो भन्ने जानकारी हुनुप¥यो ।” (साभार :आजको अर्थ)
२०७६ साउन २९ गते २१:४५ मा प्रकाशित
लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेकोे विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित धर्ना
यी विकास बैंकहरुको सेयर छ ? ल्याउँदैछन् करोडौंको हकप्रद !
ग्लोबल र जनता बैंकबीच मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
के तपाई सेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? आयो फेरि नयाँ नियम !
भूकम्प पीडितलाई ऋण दिन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनलाई दिइयो यस्तो निर्देशन